विश्वकै दुर्लभ रोग लाग्यो तनहुँका नौ महिने वालकलाई - dautarimedia.com
विश्वकै दुर्लभ रोग लाग्यो तनहुँका नौ महिने वालकलाई
काठमाडौं । ९ महिनाका बालक मुहम्मद उस्मान अलीलाई मेरुदण्ड बाँगो हुने विश्वकै दुर्लभ रोग लागेपछि परिवारले सहयोगको अपिल गरेको छ । तनहुँ सुनपा नगरपालिका दुलेगौडा स्थायी घर भएका उस्मान अलीको उपचारमा आर्थिक अभाव हुन थालेपछि परिवारले सहयोगको अपिल गरेको जनाएको छ ।
बिरामी बालक उस्मानका काका अल्लाउदिन मियाँले उस्मानमा ६ महिनादेखि नै विश्वको दुर्लभ एवं महँगो मेरुदण्ड सम्बन्धि रोग भेटिएको बताए । उस्मानको उपचारको लागि काठमाडौंमा आफन्तकोमा बसेको सुनाउदै भतिजको उपचार परिवारको पहुँच भन्दा बाहिर भएकोले ‘सबैको सहयोगको लागि हेल्प उस्मान, सेभ उस्मान’ अभियान सुरु गर्ने बताए ।
Previous: गोरखामा श्रीमती पोइल गइन्, घरमा भएकी ११ वर्षकी छोरीलाई बुवा र काकाले…?
Next: आफ्नै श्रीमानले म एक जना केटी लिएर आउँछु तिमी नरिसाउ है भन्दै आखै आगाडी श्रीमानले अरु केटिसँग सम्बन्ध राखे ? हेर्नुहोस